Iintlanzi zeguppy kunye nenkathalo yazo | Ngeentlanzi
El Intlanzi yeguppy yenye yezona ntlanzi zilula ukuzinyamekela nangononophelo olusisiseko kunye naxa uvelisa uhlobo. Inkathalo ekuphela kwayo ekufuneka ithathelwe ingqalelo kukuba awunako ukudibanisa ukuhlala kwazo kunye nazo naziphi na iintlobo kwaye, ngaphezu kwako konke, ukubanika indawo yokuhlala efanelekileyo ukuze bakwazi ukuhlala ngaphandle kwengxaki. Phakathi kwabo banokuphila ngokugqibeleleyo kuba bazolile kwaye banobuhlobo kwaye abanabundlobongela kwaphela. Nokuba ku Akucetyiswa ukuba udibanise neentlanzi ze-Betta kuba ezi zikummandla omkhulu.
Los Iiguppies ziintlanzi zamanzi ashushu Ke ngoko kwi-aquarium kufuneka kufakelwe isifudumezi ukugcina ubushushu obuchanekileyo bokukhula ngokuchanekileyo, obuphakathi kwama-22 nama-28 degrees. Kananjalo nethemometha yokulawula ubushushu, eyona nto ifanelekileyo ubukhulu becala ngama-25 degrees.
Njengakwiindawo ezininzi zasemanzini, ngaphandle koluphi uhlobo lweentlanzi onazo, kufuneka ubandakanye isixhobo sokucoca amanzi ukuze sihlale sicocekile, nangona kunganyanzelekanga ukuba uwabeke nzima, isihluzi siya kucoca kwaye sigcine i-aquarium ngamanzi acocekileyo. Inkqubo ye- I-pH yamanzi kufuneka ibe yi-alkaline, eziphakathi ko-6,5 no-8.
Nokuba unecebo lokucoca ulwelo amaxesha ngamaxesha, kuya kufuneka ucoce ubuncinci i-20% yamanzi e-aquarium kuba kuhlala kukho ukungcola okuhlala emazantsi, njengokuhlala kokutya. Ukuba sisusa ezantsi siza kubona ukuba iza njani kumphezulu kunye ne Umnatha olula siya kuba nakho ukubamba inkunkuma.
Ngokuphathelene nokutya kwabo, njengoko benemetabolism esebenzayo kakhulu kwaye ekhawulezayo, bangabanye babo badla rhoqo kodwa hayi kakhulu, kufuneka nje baqhele iiyure ezimiselweyo zokutya.
Ukubazala kwakhona kufuneka ube nendoda kunye Guppy yabasetyhini. Nje ukuba i-fry izalwe, isihluzi kufuneka sigutyungelwe kuba sinokufunxwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Guppy » Iintlanzi zeguppy kunye nokunyamekela kwazo
Izifo zentlanzi iBetta